Iibso Korantada Baaskiilka Baaskiilka elektaroonigga ah ee Biyuhu Dib-u-buuxin karo - Maraakiib Bilaash ah & Cashuur la'aan | WoopShop®
Korantada Baaskiil Baaskiil elektiroonig ah oo aan biyuhu ka buuxin karin
Korantada Baaskiil Baaskiil elektiroonig ah oo aan biyuhu buuxin karin - Buluug gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Nooca: Electric Horn
Lambarka Moodalka: YQ211
Naqshadeyn leh cabbir yar iyo muuqaal moodada casriga ah. Wareeg kor uqaaday oo leh dhawaq sare oo gaaray 120 DB.
USB dib loo soo celin karo, Baaskiilkeena Baaskiil ayaa lagu dhex dhisay 280mAh baytariyada lithium, USB dib ayaa loo buuxin karaa, 1.2-saac oo lacag bixis ah ayaa la garaacayaa 2500 jeer (qiyaastii 30 maalmood si caadi ah loo isticmaalo)
Naqshad Beddelaad Kala Beddel ah, Kala beddelasha xakamaynta, iyo geeska baaskiilku way kala soocan yihiin. Ku rakib biiro koontaroolka suulkaaga, ku habboon oo aamin ah. Hal furaha furaha, 3 qaababka codka.
IP65 Biyo-diidka & La-dagaallanka boodhka, Si buuxda u qanciso baahiyahaaga baaskiil banaanka.
Ku dheji suunka silikoonka hagaajinta dusha. ku habboon 0.86 "-1.25" (22.2-31.8 mm) dhudhun gacan-qabsi baaskiil
Badeecad aad u wanaagsan, ku tali.
Isukeenid et puissant, a voir dans le temps.
Yar, cod dheer oo wanaagsan. Yar, cod dheer oo cad.
Badeecad wanaagsan, Maraakiibta degdegga ah ...
28 maalmood kahor Izhevsk, koodhka raadraaca waxaa lagu raad raacay jidka oo dhan. Tayada waa heer sare, laakiin calaamadu waa mid aad u weyn. Laba nooc oo signaal ah, Horn iyo qaylo-dhaan.